ကုန်ကြမ်း Clostebol Acetate အမှုန့် (855-19-6) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / testosterone အမှုန့်စီးရီး / Clostebol Acetate (Turinabol) အမှုန့်
SKU: 855-19-6. Categories: testosterone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Clostebol Acetate ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (Turinabol) အမှုန့် (855-19-6) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Clostebol Acetate (Turinabol) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Clostebol Acetate (Turinabol) အမှုန့် ဇာတ်ကောင်
အမည်: Clostebol Acetate (Turinabol) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 112-116 ℃
Clostebol Acetate (Turinabol) အမှုန့် စတီရွိုက်သံသရာအတွက်အသုံးပြုမှု
ကုန်ကြမ်း Turinabol အမှုန့်အမည်များ
ထို့အပြင်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ Tbol, Macrobin, Steranabol, Alfa-Trofodermin, Megagrisevit နှင့်အတူ 855-chlorotestosterone ၏အမည်နှင့်အတူ Clostebol Acetate (Turinabol) အမှုန့် (CAS 19-6-4), ။
Turinabol (စ '' Tbol 'နှင့်ခံတွင်း Turinabol အဖြစ်လူသိများ Chlorodehydromethyltestosterone) ကအမှန်တကယ် Dianabol နှင့် Clostebol (4-chlorotestosterone) ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်မထွက်ရ, အမှန်တကယ် Dianabol (Methandrostenolone) ၏ပြုပြင်ထားသောပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ဓာတုနာမကိုအမှီ 4-chlorodehydromethyltestosterone သည်အဘယ်ကြောင့်ထို့ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံရန်ပြုပြင်မွမ်းမံက Non-aromatizable ဖြစ်ခွင့်ပြုပါနှင့်လည်း Turinabol တစ်ဦး '' အပျော့စား Dianabol '' အဖြစ်ချစ်စနိုးထားပြီးအဘယ်ကြောင့်ဖွယ်ရှိသောအရာသည်အလွန်နိမ့်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်, အပိုင်။
ကုန်ကြမ်း Clostebol Acetate အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Turinabol6တစ်ဦးအနိမ့်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် 53 တစ်ခုဟိုတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်, ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အကျိုးအမြတ်နှိုင်းယှဉ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌စုံလင်သောမြို့အနီးကစေသည်။ ကြောင့်အနိမ့်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်, ဝက်ခြံ, ကျူးကျော်ကဲ့သို့သောရန်, roid ဒေါသနှငျ့ခှနျအားတိုးရှားပါးသော်လည်း, မပေး Non-တည်ရှိသောသူဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏မိဘဟော်မုန်း Dianabol နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆီးအတားမရှိဟိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ကာယဗလအေးဂျင့်ရရှိမှုတစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်အဖြစ်ခံတွင်း Tbol မမြင်မိပါဘူး။
Turinabol testosterone ၏ posses အကြမ်းဖျင်းတစ်ဝက်ဟို rating, တစ်နေ့လျှင် 40-60mg ၏အကွာအဝေးအတွက်ဆေးညွှန်းတစ်ခုမိတ်ဆက်အဖြစ်အကြံပြုနိုင်အောင်။ Turinabol ဆေးညွှန်းတစ်နေ့လျှင် 80-100mg ကျော်လွန်နိုင်ပေမယ့်ကာယဗလအကျိုးအမြတ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်တည်ရှိနေတုန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထရန်စတင်သတင်းပို့ပါ။
သောကြောင့်ဟိုသက်ရောက်မှုရန်၎င်း၏အန်ဒရိုဂျင်၏၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်၎င်း၏မိဘဟော်မုန်း Dianabol ထက်အားနည်းဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Tbol အတူအာမခံချက်မဆိုသိသာကြွက်သားအဆောက်အဦစွမ်းရည်နှင့်အတူကြောင့်အန်ဒရိုဂျင်ဆိုးကျိုးများနှင့် (ကြောင့်အီစထိုဂျင်သို့ aromatize ရန်၎င်း၏နိုင်ခြင်းမှ) လုံးဝမပါအီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှု၏လမ်းအများကြီးလျော့နည်းတင်ပြပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ သောကြောင့် Dianabol ထက်၎င်း၏မျှမျှတတအားနည်းအစွမ်းသတ္တိ၏, Tbol ထံမှသက်ရောက်မှုထုတ်ယူနိုင်ရန်လိုအပ်သောဆေးများ (ဒီဒီပရိုဖိုင်း၏ Tbol ဆေးများအပိုင်းအတွက်မကြာမီကရှင်းပြသည်ပါလိမ့်မည်) အတော်လေးမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလဆိုဖောင်း၏အဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှု, gyno, သို့မဟုတ်အခြားအီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတည်ငြိမ်နှင့်အရည်အသွေးပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အကျိုးအမြတ်ကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ mass နှငျ့ခှနျအားအကျိုးအမြတ်ကြောင့်ဟိုအစွမ်းသတ္တိ၏၎င်း၏မရှိခြင်းသိသိသာသာဖြစ်သိကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတသမတ်တည်းပေါက်သောမှန်မှန်နှင့်အရည်အသွေးပိန်လာဘ်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကြောင့်အီစထိုဂျင်သို့ပြောင်းလဲရန်၎င်း၏နိုင်ခြင်းမှအဆီဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ် Pre-ပြိုင်ပွဲပြင်ဆင်မှုကာလအတွင်းမှာတစ်ဦးစံပြဖြတ်တောက်ခြင်းအေးဂျင့်အဖြစ်ကိုလည်းအသုံးပြုပါသည်။ အဲဒါကို run သောအခါ Turinabol ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတကယ် SHBG မှခညျြနှောငျရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကြောင့်သည်အခြားဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူ (stacked) အခြားဟို steroids တစ်ခုတွဲဖက်အဖြစ်ထွန်းလင်း။ SHBG မှ binding ကထားပါတယ်အခြားအားသာချက်ဖြစ်သော SHBG က uninhibited ခံရပါကသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်ရရှိနိုင်ဖြစ်နှင့်အတူ stacked ဖြစ်ပါတယ်အခြားဟို steroids ပိုမိုခွင့်ပြုပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Turinabol အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
ရေရှည် application ကိုဆိုဒီယမ်, ရေ retention ကို, ဒါကြောင့်လူနာ bogey ၏ဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဆိုဒီယမ် retention ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အသည်းရောဂါ, သွေးတိုးရောဂါ, ဖော, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာလူနာများနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအသုံးပြုမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကိုအနည်းငယ်အမျိုးသမီးပုလ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ကုန်ကြမ်း Clostebol Acetate အမှုန့်နောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်
Clostebol မူးယစ်ဆေးဝါးတိုးမြှင့်မယ့်စွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ်အလားအလာအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအားနည်း AAS ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလား Anti-Doping Agency ကများကပိတ်ပင်ထားသည်။ ခံတွင်း Turinabol, clostebol နှင့် metandienone များ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံပေါင်းစပ်ပြီး, ကျယ်ပြန့်ဂျာမန်အရှေ့ State-sponsored doping အစီအစဉ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Tbol မကြာခဏကတခြားဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူပေါင်းစပ် stacked ဖြစ်ပါတယ်, ဒီကပျော့ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများသဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်လျှော့ချမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Turinabol ထို့ကြောင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိမှုအေးဂျင့် Tbol ကျော်မျက်နှာသာနေကြတယ်, steroids ၏အရှိဆုံးဟိုသို့မဟုတ်အန်ဒရိုဂျင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအတော်လေးပျော့ဟိုအဆင့်, အဆီဆုံးရှုံးမှုကာလနှင့် Pre-ပြိုင်ပွဲကာယဗလဖြတ်တောက်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုသည်။
Turinabol သံသရာ 40-60 ပတ်တစ်နေ့လျှင် 6-8mg အကြားမှာတစ်ယောက်တည်းပါးစပ် running ရှိရေးနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအတွက်ကောင်းတဲ့တိုးတက်မှု, ပိန်ကြွက်သားပေးပြီးတဲ့အခါကယ်လိုရီလိုငွေပြမှုအတွက် Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုသူကြွက်သားထုထည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ခွဲ 10% ခန္ဓာကိုယ်အဆီမှရတဲ့ပန်းတိုင်အခါပရိုတိန်းပျက်ပြားကာကွယ်ခြင်းတာလိုအပ်နေသောလက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။
ခံတွင်း Turinabol ပိုမိုအဆင့်မြင့်ထပ်ကဲ့သို့သောအခြားအပေါင်းများကိုဆိုလိုနိုင်ပါတယ်; testosterone များ၏ညှိနှိုင်းသက်ရောက်မှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ က Short နှင့်ရှည်လျားသော estered testosterone ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 100mg မှာ testosterone Propionate 60 ရက်သတ္တပတ်တည်တံ့တစ်နေ့လျှင် Turinabol 8mg နှင့်အတူသည်အခြားနေ့ရက်ကိုထိုးသွင်းနွေရာသီအဘို့အပိန်ကြွက်သားထုထည်နှင့် Diet များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ stack ဖြစ်ပါတယ်။
testosterone ၏မဟုတ်တော့သံသရာစဉ်အတွင်းဥပမာ, 12 ပတ် testosterone Enanthate သုံးပြီးတစ်ဦးပါးစပ် "တွင်ကန်ဘောက" testosterone နေတုန်းပထမဦးဆုံး 4-6 ပတ်မိတ်ဆက်သည်။ ဤသည်တည်ငြိမ်သည်အသွေးပလာစမာအဆင့်ဆင့်ကသူတို့အထွတ်အထိပ်မှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကြွက်သားထုထည်နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်ပေါင်းစပ်အတွက်အကျိုးအမြတ်ဟာသူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးမှာဖြစ်သည့်အခါအတှကျအသုံးပွုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
Turinabol ပိုပြီးအစွမ်းထက်နှင့်ကြာရှည်ကြွက်သားထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ကိုအသုံးပြုသည်သူအားကစားသမားလျင်မြန်စွာခွန်အားကြွက်သားနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ရဖို့ရန်မျှော်လင့်ထားသင့်ပါဘူး။ ဒါဟာ "ရေရှည်" ဟို Steroid တစ်မျိုးပါပဲ။
၎င်း၏အနိမ့်သောက်သုံးသောမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ကလျင်မြန်စွာလှည့်ဆီးကနေတဆင့် metabolites ပျောက်လွသောခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် assimilated ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအားကစားသမားတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုမီ5နေ့ရက်ကာလ၌ကုသမှုရပ်လျှင် anti-doping စမ်းသပ်မှုများသောအားဖြင့် Turinabol detect မရကြဘူး။
Turinabol ကြောင့်ရေနှင့်သတ္တုဓာတ်၎င်း၏လက်ကျန်ငွေကိုရေ retention ကိုဦးတည်သွားစေပါဘူး။ ဒါဟာ Dianabol ကဲ့သို့အခြားဟိုထက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လျော့နည်းအန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသတ်မှတ်ထားသည့်ကုသမှုအရှည်ကျော်လွန်ဖို့သတိထားပါဖြစ်ရမည်သော်လည်းသဘောကိုဤကိုလည်းအလွယ်တကူအသုံးပြုအမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိုရင်းအစားထိုး aromatase နှင့်အတူအပြန်အလှန်ကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် gynecomastia သို့မဟုတ် DHT ပြောင်းလဲခြင်းနည်းနည်းအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ Turinabol "သဘာဝကျကျ" သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ဆင်နေများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝကြွက်သားတည်ဆောက်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အများအပြားအားကစားသမားလည်းကျန်ကြွင်းသောကာလကို (Off-ရာသီ) ကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်ဆိုလိုသည်။ ဒါကသူတို့အဆင်သင့်ရအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိမှုမရှိဘဲကြွက်သားအားကောင်းလာစေရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Clostebol Acetate အမှုန့် (CAS 855-19-6)
Half Life: 16 နာရီ
detection အချိန်: 11 - 12 လအတွင်း
ဟို Rating: 54
အန်ဒရိုဂျင် Rating: 6
ကုန်ကြမ်း Clostebol Acetate အမှုန့်စျေးကွက်
Clostebol Acetate အမှုန့် (CAS 855-19-6) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို: AASraw ထံမှ Turinabol အမှုန့်ကိုဝယ်
AASraw ကာယဗလသို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99% Clostebol Acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။
ကုန်ကြမ်း Clostebol Acetate (Turinabol) အမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း:
Clostebol Acetate အမှုန့်များ၏ဆိုးကျိုးများ: အဘယ်ကြောင့်လူပေါင်း Tbol ကိုချစ်?
Nandrolone cypionate အမှုန့်
Methenolone Acetate (Primobolan) အမှုန့်
testosterone Propionate အမှုန့်